Abahlinzeki be-PVC SHEET LINE kanye neFektri - Abakhiqizi baseChina PVC
Ishidi elisobala le-PVC linezinzuzo eziningi zokumelana nomlilo, ikhwalithi ephezulu, izindleko eziphansi, okusobala okuphezulu, indawo enhle, indawo, igagasi lamanzi elingaphansi, ukumelana kwesiteleka okuphezulu, ukubumba okulula nokunye. Lisebenza ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokupakisha, ukuklina icala, njengamathuluzi, amathoyizi, ama-electric, ukudla, imithi nezingubo
Ishidi elisobala le-PVC lenziwa ngumugqa wethu we-Extrusion othole lezo zici
1. Ukutshalwa kwezimali okuningi kwezemishini;
2. Ukusebenza okulula ekulawuleni inqubo yeshidi;
3. I-mantainance elula kulayini ophelele;
4. Ukuqina okuhle nokuqinile kweshidi kusuka kulayini;
Imodeli JHZ80 / 156 / JHZ92 / 188 / JHZ 110/220 AMAKHONO 300kg / ihora kuya ku-1500kg / ihora Ngokuya ngesimo sokwakha izinto ezihlanganayo Ngokuya ngesimo sokwakha izinto ezihlanganayo, inqubo yokukhishwa kwephrofayili yepulasitiki ingahlukaniswa ngokuhlangana kwangaphambili bese uthumela ukuhlangana. I-pre coextrusion isho ukwakheka okwakhiwe kwezinto ezimbili ngenkathi kwenziwa ukwakheka okungaphelele; I-post coextrusion isho ukuthi into eyodwa yakhiwe ngokuphelele bese ihlanganiswa nenye into ...
I-eauipment isebenza ukukhiqiza ishidi elisobala nelithambile nge-PVC powder, engathatha isikhundla seshidi le-PVC lekhalenda.
Isisetshenziswa semishini: ukonga imali, ukusebenzisa okuzinzile, okuphezulu.
Ububanzi bomkhiqizo: ubukhulu 0.2-3mm, ububanzi 2000mm (ngaphansi)
Isicelo: Kufanelekile ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zephepha lepulasitiki le-PVC elisobala, elingabonakali futhi eligcwalise kakhulu.
Ngokusekelwa ngokugcwele kokubili kusakhiwo sesitshalo nobuchwepheshe bokukhiqiza, singanikeza iphrojekthi ye-tunkey yephrojekthi yonke ukuqinisekisa ukuthi ikhasimende lingaqala ngokushesha.